တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: မြန်မာအိုင်တီသမားတွေSingapore မှာအလုပ်ရကြသတဲ့ (အပိုင်း-၄)
မြန်မာအိုင်တီသမားတွေSingapore မှာအလုပ်ရကြသတဲ့ (အပိုင်း-၄)
လေဆိပ်က ဆင်းလို့ ပစ္စည်းတွေ များလျှင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်မသိတဲ့ နေရာ တစ်ခါမှ မသွားဘူးတဲ့နေရာတွေကို အချိန်မှီ သွားရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခါတရံ Taxi စီးဖို့လိုပါသည်။ စင်္ကာပူတွင် Taxi ခ ဈေးဆစ်စရာမလိုပါ။ Taxi ကိုတားပါ၊ ရပ်ပေးလျှင် ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီး ဒရိုင်ဘာကို မိမိသွားလိုသည့်နေရာ ပြောပြပေးလိုက်ပါ။ ခရီးအကွားဝေးအလိုက် မီတာဖြင့် တောင်းပါသည်။ ဘီးလိမ့်သလောက်သာ မီတာခ တက်ပါသည် (ဥပမာ။ ။မီးပွိုင့်တွင်ရပ်နေလျှင် မတက်ပါ၊ မြန်မြန်မောင်းလျှင် မြန်မြန်တက်သည်)။ သွားချင်သည့်နေရာကို Traffic နည်းသည့်နေရာမှ အချိန်တိုတို အတွင်းရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ငွေရှင်းပြီးလျှင် Receipt ခေါ် လက်ခံဖြတ်ပိုင်း တောင်းသင့်သည်။ လက်ခံဖြတ်ပိုင်း ရှိထားတော့ အကယ်၍ မတော်တဆ Taxi ပေါ်တွင် သင့်ပစ္စည်း တစ်ခုခု ကျန်ခဲလျှင်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကတွေ့ထားလျှင် Receipt ဖြင့် ပြပြီး ပြန်တောင်းလို့ရသည်။ Receipt ပေါ်မှာ "FEEDBACK/ LOST & FOUND HOTLINE: 65524525" စသည်ဖြင့် ဖုံးနံပါတ်လည်းပါသည်။
Taxi ကို ဖုံးဖြင့် Booking လုပ်လို့ရသည်။ စနစ် တွေကကောင်းသည်။ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ လိုအပ်လျှင် FastCall Service သုံးသည်။ (ဥပမာ 6454 2222 ကိုနှိပ်၊ မိမိရပ်နေသည့် Taxi stand ၏ PIN နံပါတ်ကို နှိပ်၊ အလိုလျှောက် စကားပြောစက် က လာမည့် Taxi နံပါတ်ကို ပြန်ပြောသည်။ မှတ်ထားရသည်။ ၅မိနစ်လောက် အတွင်း ရောက်လာသည်။) Taxi Booking Service အမျိုးမျိုး အကြောင်း အသေးစိတ် ဖတ် ကြည့်လိုလျှင်
Taxi တစ်စီး ၏ အတွင်းဘက် မြင်ကွင်း (6:40 ဟု ဒစ်ဂျစ်တယ် မီးနီဖြင့် ညွှန်ပြနေသော ကိန်ဂဏန်းကွက်မှာ သင်ပေးရမည့် ငွေ Amount)
စင်္ကာပူ တွင် Taxi စီးစီး ကိုယ်ပိုင်ကားစီးစီး ရှေ့ကထိုင်ထိုင် နောက်က ထိုင်ထိုင် ခါးပါတ်ပါတ် ရမည်။ ခါးပါတ် မပါတ်တာကို ရဲတွေ့သွားလျှင် ပြဿနာ ဖြစ်မည်။ ဒါဏ်ငွေ ၁၀၀၀ လောက် ရိုက်မည်။ စလုံးမှာ ဒါဏ်ငွေတွေ တစ်ခါတစ်ခါ ဆောင်ရလျှင် နဲနဲနောနောမဟုတ်။ မြို့လယ်ကောင် တွေမှာ ဆို တံတွေးထွေး နှပ်ပစ် လျှင်တောင် ပေါ်တင်ကြီး မိလျှင် ဒါဏ်ငွေ ရိုက်ခံရသည် ဟုကြားသည်။ မြန်မာပြည်က စီးကရက်ဘူး သယ်လာတာတွေ့လျှင်လည်း ဒါဏ်ရိုက်သည်။ ဒီမှာက လူအများက Marlboro သောက်ကြသည်။ မှောင်ခိုစီးကရက် က 5$ လောက်ပဲ ရှိသည်။ ဈေးတစ်ဝက် ခန့် သက်သာ သည်။ ဒါပေမယ့် လူမြင် မခံရ အောင် ဘူးကို ၀ှက်သောက်ရသည်။ အတိုင်ခံ ရလျှင် ဒါဏ်ရိုက်ခံရမည်။ စီးကရက်ဘူးခြင်းက ကွာသည်။ တရားဝင် စီးကရက် တွင် ဆေးလိပ်သောက်ရင် ဘာရောဂါညာရောဂါ ဖြစ်မည်ဆိုသည့် အနိဌာရုံ မြင်ကွင်းများ ရိုက်နှိပ် ထားသည်။ မှောင်ခိုဘူး က ဒါတွေ ဘာမှ မပါ။ (ပေါ်တင်မရောင်း၊ ကိုယ့် ဘာသာကို အဆက်အသွယ် ရှာထားပြီး ၀ယ်ထားရသည်။)
Bus ကားဂိတ်များ MRT Interchange များတွင်လည်းကောင်း၊ Bus ကား ပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ရထား ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ စီးကရက် မသောက်ရ။ စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ မုန့်များ မစားရ၊ အအေးဗူးမသောက်ရ။
စင်္ကာပူ က စီကရက်ဗူး တွေမှာ ဒီလိုတွေ ရိုက်နှိပ်ထားသည်။ တစ်ဗူး 11$ လောက်ရှိသည်။ ဘာတွေရိုက်ထားထား၊ ဘယ်လောက်ဈေးကြီးကြီး လူတွေကတော့ တအားသောက်သည်။ ကောင်မလေးတွေပါသောက်သည်။ တချို့ ကောင်မလေးတွေ ဆို စီးကရက် ကို လက်ကြားကတောင်မချ။
Posted by Philip Shield at 10:48 AM
Nice job. I have never been to Singapore. Despite my close freinds living there foralong time, I didn't have such info about singapore before. Thanks. Hope you would post more about your place.